Itoobiya oo ku jirta isku daygii ugu danbeeyay ee lagu hakin lahaa doorashada J/lad - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Itoobiya oo ku jirta isku daygii ugu danbeeyay ee lagu hakin lahaa...
Itoobiya oo ku jirta isku daygii ugu danbeeyay ee lagu hakin lahaa doorashada J/lad
Iyada oo uu maalintii shalay ahayd uu magalaada Muqdisho ku soo laabtay agaasime ku xigeenka hay’ada NISA Fahad Yasin oo in mudo ah soo joogay magalaada Addis Ababa ayaa waxa safakiisii shalay ku wehliyay saraakiil ka socotay sirdoonka dalka Itoobiya.
Sida loo xaqiijiyay MOL Saraakiishaan oo uu wehliyo safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaludin Mustafa ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay kulan albaabada u xiran yihiin kula yeesheen Villa Soomaaliya Farmaajo, Kheyre iyo Fahad iyada oo laga arinsanaayay sidii looga hortagi lahaa doorashada Madaxweynaha Jubbaland.
MOL wali uma suuragalin in ay hesho go’anadii xalay ka soo baxay shirkii Villa Soomaaliya. Dhanka kale Saraakiishii xalay ka qaybgashay kulankaa ayaa saakay u safatay magaalada Kismaayo, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo socdaalkooda.
Saraakiishaan ayaa la filayaa in ay kulamo la yeelan doonaan Madaxda Jubbaland, waxaana arrinta ugu weyn socdaalkooda uu yahay doorashada Jubbaland iyo sidii culeys u saari laahaayeen Axmed Madoobe.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ay ka go’an tahay in uu ka horyimado doorashada Madaxweyne Axmad Madoobe. Waxa uu horay isugu dayay in uu dagaal ka abuuro deegaanka Jubbaland si doorashada u baaqato.
Wixii ka soo baxo safarka sirdoonka Itoobiya ee Kismaanyo gadaal ayaa idinkaga soo sheegi doonaa